အရက်​သမား ပို့စ်​ -၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အရက်​သမား ပို့စ်​ -၁	19
အရက်​သမား ပို့စ်​ -၁
Posted by naywoon ni on Apr 21, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary, Myanma News | 19 comments
​ခေတ်​​တွေက ​ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီ။ အမျိုးသမီး​တွေ​တောင်​ လူမြင်​ကွင်းမှာ ​ပေါ်​ပေါ်ထင်​ထင်​ ဘီယာဘူး ကိုင်​ရဲတဲ့ အချိန်​မှာ အရက်​အ​ကြောင်း မ​ကောင်း​ပြောပါက အဆဲ​တောင်းသလိုဖြစ်​​တော့မယ်​ ။ ဆို​တော့ကာ အရက်​အ​ကြောင်း အ​ကောင်းအဆိုး သိခဲ့သ​လောက်​ ကြုံ​တွေ့ခဲ့ရသ​လောက်​က​တော့ဖြင့်​ ဒီလိုပါဗျာ ဆိုပြီး ကိုယ့်​ဂုဏ်​ ကိုယ်​​ဖော်​ မသူ​တော်​အလုပ်​ ၀င်​လုပ်​ရ​တော့မယ်​ ။ နို့မို့ဆို သိ​နေရက်​နဲ့ ကြိုမ​ပြောရ​ကောင်းလား လို့​တော့ အ​ပြောမခံနိုင်​​ချေဘူး ။ ​ ​နေ၀န်းနီ က အရက်​နဲ့ ဘ၀ခါးဆက်​ပြတ်​ခဲ့ရသူ ။ အနီးပါတ်​၀န်းကျင်​မှာ သိတဲ့သူ​တွေက ဇိုး စာရင်း အသွင်းခံထားရသူ ။ ကျင်​လည်​ခဲ့သ​လောက်​ ကျင်​လည်​နိုင်​တဲ့ အရက်​​လောက ထဲမှာ အနိုင်​နဲ့ပိုင်းထားသူလို့ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် ယူဆထားသူ( ကျင်​လည်​နိုင်​တဲ့ အရက်​​လောက ဆိုတာ ကိုယ့်​ဝင်​​ငွေ​လေးနဲ့ ​သောက်​နိုင်​တဲ့ ပတ်​၀န်းကျင်​ကို​ပြောတာ ။) ပတ်​၀န်းကျင်​ကလည်း အ​ခြေခံလူတန်းစားပဲရှိ​လေ​တော့ များ​သောအားဖြင့်​​သောက်​နိုင်​တယ်​ဆိုတာက ပြည်​တွင်းဖြစ်​ အရက်​ဖြူ -( ခု​တော့ အရက်​ဆီ ​ပေါ့​လေ )- နဲ့ ထန်းညက်​က ချက်​တဲ့ ​ဒေသန္တာရအရက်​ (​တောအရက်​ ) ဖြစ်​​လေ​တော ဘီအီဒီစီ +​တောအရက်​ဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ ဘီ​တော အရက်​အ​ကြောင်းပဲ​ပြောနိုင်​မှာ ။ နိုင်​ငံခြားကလာတဲ့ အရက်​အ​ကြောင်း​တော့ နိုင်​ငံ​တော်​ကလည်း တရားဝင်​ တင်​သွင်းခွင့်​မပြုထား​လေ​တော့ ပြည်​တွင်းဖြစ်​ ​ဈေး​ပေါ​ပေါ ပဲပဲ အရက်​သမား​တွေအ​ကြောင်း​ပြောပါ့မယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ အရက်​​သောက်​တတ်​ကာစက ၁၉၈၆/၈၇ ​လောက်​ ။ မန္တ​လေးတက္ကသိုလ်​​ကျောင်းသားဘ၀ ( ဒီအ​ကြောင်းနဲ့ ပတ်​သက်​လို့ အ​သေးစိတ်​က​တော့ ​နေ၀န်းနီရဲ့ မဆုံးတဲ့ သီချင်း ပို့စ်​အတွဲကိုရှု့ ) အရက်​ဖြူက တစ်​လုံး ခုနှစ်​ကျပ်​နဲ့ ပြားနှစ်​ဆယ်​ ။ မယုံမရှိနဲ့ ။ အစိုးရက တရားဝင်​ ဆိုင်​ဖွင့်​ပြီး​ရောင်း​ပေးတာ ။ အဲ့ဒိတုန်းက ​ဂေဇက်​တက်​​အော်​ဖစ်​ဆာ မှ ​လေးရာ့ငါးဆယ်​ – အစိတ်​ – ခုနှစ်​ရာ​ခေတ်​ ။ တက္ကသိုလ်​​ကျောင်းသား တစ်​​ယောက်​ကို တစ်​လ သုံး​လေးရာ ကုန်​တာ ။ ဘုန်​ကြီး​ကျောင်းက​နေ တက်​ရင်​ တစ်​လ နှစ်​ရာ ။ လက်​ဖက်​ရည်​တစ်​ခွက်​မှတစ်​ကျပ်​ကိုး ။ ကုန်​​ဈေးနှုန်း​တွေခင်းကျင်း​နေတာ တစ်​ရက်​ ​နေ၀န်းနီ ဦ​လေး အရွယ်​ အကိုကြီးတစ်​​ယောက်​နဲ့ စကားစပ်​မိတာ​လေး​ပြောချင်​လို့ မြန်​မာပြည်​မှာ အရက်​က မအို​ဆေးတဲ့ ။ အရက်​​သောက်​စအရွယ်​က ဆယ့်​​လေးငါး​ခြောက်​နှစ်​ ။ အနှစ်​သုံးဆယ်​​လောက်​ ဆက်​တိုက်​​သောက်​ပြီးရင်​ ​လေးဆယ့်​နှစ်​ ​နဲ့ ​လေးဆယ့်​ရှစ်​ကြားဆို ဘ၀နိဂုံးချုပ်​ကုန်​ပြီ ။ ဆို​တော့ အို​အောင်​ကို မ​နေလိုက်​ကြရဖူး ။ ဘာ​ကြောင့်​ ဒီလိုဖြစ်​ကုန်​လဲ ။ အရက်​ရဲ့ အရည်​အ​သွေး​ကြောင့်​ ဆိုရင်​မမှားပါဘူး ။ ဘာ​ကြောင့်​အရည်​အ​သွေးကျရသလဲ ။ လူ​တွေရဲ့ ၀င်​​ငွေနဲ့ အရည်​အ​သွေးပြည့်​မှီတဲ့ အရက်​ကို လိုက်​မ​သောက်​နိုင်​လို့ ။ လူ​တွေရဲ့ ၀င်​​ငွေနဲ့ သူတို့တတ်​နိုင်​တဲ့ ​ငွေ​ကြေးပမာဏ ကိုကြည့်​ပြီး စီးပွား​ရေး တွက်​​ခြေကိုက်​​အောင်​ ထုတ်​လုပ်​လိုက်​တဲ့အတွက်​ အရက်​ရဲ့ အရည်​အ​သွေးဟာ တစ်​နှစ်​ထက်​တစ်​နှစ်​ ပိုပိုကျဆင်းလာတာ ။ တစ်​ဦးချင်းဝင်​​ငွေ က တိုးတက်​လာတဲ့ ကုန်​​ဈေးနှုန်းကို လိုက်​မမှီ​တော့ အရက်​တင်​မ​ဟုတ်​ဘူး ။ တစ်​ခြား စား​သောက်​ကုန်​ လူသုံးကုန်​ပစ္စည်း​တွေမှာပါ အရည်​အ​သွေး လိုက်​ပြီးကျဆင်းကုန်​တယ်​ ။ အဲ့ဒါနဲ့အတူ လူ​တွေရဲ့ အကျင့်​စာရိတ္တ သီလသမာဓိ စည်းကမ်း အပြုအမူ အ​ပြောအဆို အ​နေအထိုင်​​တွေပါ တစ်​နွယ်​ငင်​ တံစဉ်​ပါ ကျဆင်းကုန်​တာ ။ ​သေချာပြန်​ဆန်းစစ်​ကြည့်​ရင်​ ရင်​နာဖို့​တော်​​တော်​​ကောင်းပါရဲ့ ။ ( ဘယ့်​နဲ့​ ​နေ၀န်းနီရယ်​ အရက်​သ​မားအ​ကြောင်း ​ပြောမလို့ဟာ နိုင်​ငံ​ရေး​တွေပါကုန်​ပြီ ။ ကျ​နော်​တို့နိုင်​ငံက ဘယ်​က​နေစထွက်​ထွက်​ ဆ်ုက်​စရာက ဒီဘူတာပဲရှိတာ ​ ​အော်​ တစ်​ရက်​က အကိုကြီး တစ်​​ယောက်​နဲ့စကားစပ်​မိတာ​လေး​ပြောပြမလို့ ။ သူ​ပြောသွားတာက
” လွန်​ခဲ့တဲ့ နှစ်​သုံးဆယ်​​လောက်​ အရက်​ဈေးနှုန်း ​က ခုနှစ်​ကျပ်​ ပြားနှစ်​ဆယ်​ကွာ ။ ဆေး​ပေါ့လိပ်​​က တစ်​လိပ်​ တစ်​မတ်​ ။ ​ရွှေ​ဈေးနှုန်း တစ်​​ထောင်​၀န်းကျင်​ပဲရှိတာ ။ အခုလက်​ရှိ အရက်​ဖြူ မရှိ​တော့ အဆီစပ်​ အရက်​က တစ်​ချို့​နေရာ​တွေမှာ ​လေးရာကွာ ။ တစ်​ချို့ရွာ​တွေမှာ နှစ်​ရာ့ငါးဆယ်​ ၊ ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​က တစ်​လိပ်​ အစိတ်​ ​ရွှေ​ဈေးကျ​တော့ ခုနှစ်​သိန်း ၀န်းကျင်​ ကွာခြားတဲ့ နှုန်​ထားချင်​တူလား ။ အဆအနဲဆုံး ပစ္စည်းက အရည်​အ​သွေး အကျဆုံးပဲ ။ ”
အဲ့သလို စံနှုန်း​တွေယှဉ်​ပြီး နှိုင်းယှဉ်​ပြလိုက်​​တော့ အဓိက တရားခံက ဘွားဘွားကြီး​ပေါ်လာတာ ။ ဒါဖြင့်​ လူ​တွေဘာလို့ အရက်​​သောက်​ကြသလဲ ။ စလာပြီ ။ ဒီ​မေးခွန်းက ​တော်​​တော်​ ဂွကျတဲ့​မေးခွန်း ။ အများစု ​သောက်​​နေတာက ဘီအီး နဲ့​တော အရက်​ ။ နံလည်းနံ​သေး။ အရသာကလည်း ပူစပ်​ခါး ။ ထွက်​တဲ့ ​ချွေး ဆီး အစ အရက်​နံ့ကြီးက ​တော်​​တော်​ဆိုး ။ ဒါဖြင့်​ ဘာလို့ ​သောက်​​နေကြလဲ ။ တစ်​ချို့များ အားမနာ လျှာမကျိုး ​ခွေး​တောင်​ မ​သောက်​တဲ့ အရည်​တဲ့ ။ ဒါကြီးကို မက်​မက်​စက်​စက်​ လူတစ်​ကာ လက်​ညိုးထိုးခံ ​မေးအ​ငေါ့ ခံပြီး​သောက်​​နေကြတာ အ​ကြောင်း​တော့ ရှိရမယ်​ ။ ဘာပဲ​ပြော​ပြော စွဲတယ်​ဆိုမှ​တော့ ​ကောင်းတာရှိလို့ စွဲတာ​ပေါ့ ။ ​ကောင်းကွက်​မရှိရင်​ ဘယ်​သူက စွဲမလဲ​နော့ ။ ဟုတ်​ဖူးလား ။ *အပိုင်း -၂ ဆက်​လက်​ဖတ်​ရှု့ပါရန်​ ​နေ၀န်းနီ
2015 Apr 21 About naywoon ni
ခင်ဇော် says: ဟုတ်။
ရေးပေးပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: နည်းနည်း ရီဝေဝေဖြစ်သွားတယ်
Alinn Z says: အရက်ပြင်းပြင်းကြီးတွေ ငါးပက်စာလောက် သောက်မိရင်
ကျနော့်တကိုယ်လုံး နေရာအတော်များများမှာ အင်ပြင်လို အပိန့်တွေ ပေါက်လာတတ်တယ်
အနီစက်တွေနဲ့ အရည်ပြား ယားယံလာတတ်တယ်။
အရက်နဲ့ ကျနော့် သွေးသားက သိပ် ဓါတ်မတည့်ဘူးထင့်
ဘာကြောင့်လဲတော့ သေချာမသိ။ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ သောက်တာများသွားတိုင်း
နောက်နေ့ဆို အဲ့လို ခံစားရတော့ သောက်ရင် နှစ်ပက်လေးက အလွန်ဆုံးပဲ
ဝီစကီလို အရက်ပြင်းတွေ များများ မသောက်နိုင်။
အဲ. . . ဘီယာကျတော့ နှစ်ပုလင်းလောက်လည်း ဘာမှမဖြစ်
ဟီဟိ။ ဒီတော့ ဘီယာဆိုရင်တော့ လာထား ဂလု ဂ လွတ် နဲ့ကို သောက်မိ
ဒါပေမယ့် ပေါ့လေ. . .
အပေါစား မြန်မာဘီယာတောင် တစ်ပုလင်းကို ထောင့်ငါးရာနားကပ်နေတာ
ဗူးလေးတွေကျတော့လည်း ဆယ်ငုံစာလောက်ပါတဲ့ ဗူးအသေးလေးတွေ တဗူး ခြောက်ရာ ခုနှစ်ရာ
ABC တို့ Myanmar တို့ တိုက်ဂါးတို့ဆ်ိုရင် ဗူးသေးလေးတဗူး ရှစ်ရာ ကိုးရာ
ဆိုတော့ ဘီယာကို သောက်ချင်ရင်တောင်မှ ပေးရမယ့် ငွေကြေးကို နှမြောမိ
.ငွေကြေး ပြေလည်သူလည်း မဟုတ်လေတော့ ဘီယာကို သောက်ဖြစ်ဖို့ အတော်ရှားပါးးးး
.ကိုယ့်အသည်းကို ဒုက္ခကောင်းကောင်ပေးနိုင်တဲ့ အဆိပ်အတောက်ကိုတောင်
.ဈေးကြီးပေးပြီး (ကိုယ့်ဝင်ငွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများပေးပြီး) ဝယ်သောက်ရတဲ့တိုင်းပြည်
lu lu says: အရက်က သူ့ ဂုဏ်သတ္တိ နဲ့ သူ နေတာ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဘာမှမလုပ်ဘူးး
မနေ နိုင်မထိုင် နိုင်နဲ့ သူ့ ကိုသွားသွားသောက်နေတဲ့ လူတွေ က မှား တာ ကွကိုသောက်ပြီး အရက် ကိုအပြစ်ပြော နေကြတာ မကောင်းတာက အရက်ကိုသောက် တဲ့လူ တွေပဲ
Mr. MarGa says: မသောက်ဘဲနဲ့ အပြစ်ပြောနေတဲ့သူတွေကိုကျ ဘယ်လိုပြောမလဲဟင်
အောင် မိုးသူ says: အရက်ဆို အကောင်းစားပဲသောက်တယ်။ ဘီအီးလည်းမသောက်ဖူးဘူး ဇေလည်းမသောက်ဖူးဘူး။ ရွိုင်ရယ်ကလက်တို့ ဟိုက်ကလက်တို့လည်းမသောက်ဖူးဘူး။ ဘီယာတော့သောက်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မုယောစပါးနဲ့လေ။ ငိငိ ဒါပဲကောင်းတယ်။
Mike says: .ဂလု..ဂလု
.အရက်ကတော့ ငွေကုန် လူထိ တာမငြင်းသာပါဗျာ…ဆက်ဖတ်ပါအုံးမယ် ဆြာနီ
လုံမလေးမွန်မွန် says: 2009 မှာ အဖေဆုံးတယ်.. အဖေမဆုံးခင်အထိ အရက်ဖြူဈေးက တစ်ပုလင်းကို ၃၀၀ တဲ့… အဖေက အမြဲပြောတယ်.. ငါက သူများတွေလို မိန်းမပွေ..လောင်းကစား လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့.. မိန်းမပွေတာတို့. ဖဲရိုက်တာတို့က ငွေအရမ်းကုန်တယ်.တဲ့.. ငါ့အရက်က တစ်ပုလင်းမှ ၃၀၀ ထဲရယ်တဲ့.. ငွေတော့ မကုန်ဘူး..အသက်တော့ ကုန်သွားတယ်..
လှိမ့်သောက်ပစ်နေတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: အရက်အကောင်းစားလေးကို အချဉ်ဓါတ်ကဲတဲ့ အသီးစုံတစ်ပွဲရယ် ချိစ်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူလေးရယ်… ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ် ဆီစိမ်လေးရယ် .တစ်ပက်စာလောက်လေးကိုရေခဲတုံးလေးသုံးတုံးလောက်နဲ့ ဆော်ဒါလေးနဲ့ရော … ဗီသိုဗင်ရဲ့ မွန်းလိုက်ဆိုနားတာလေးကို home theater လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် နားကြပ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နားထောင်….
အဲ့တာနဲ့ စွဲပါရောလား ..အဟိဟိ
မြစပဲရိုး says: .သောက်လိုက်ရင် “ချို” မြိုလိုက်ရင်”ခါး” ပြီးတော့ စိတ်ထဲ မယ် “ပျော်” သလိုဖြစ် နောက် “ဝမ်းနည်း” ဒါမှမဟုတ် “ဒေါသ” ဖြစ်ချင်လဲဖြစ် နောက်တော့ “ရီဝေဝေ” အဲဒီနောက်မှာ လောကကြီးကို “မေ့” ရော။
. ကြည့်ရတာ ရသ မျိုးစုံ ကို တစ်ထိုင်ထဲ ရ သွားလိုက်လို့ အရက်စွဲသူ တွေ
ကွ ကို ရောဂါအဖြစ်ခံ ပြီး သောက်ကြတာ နေမယ်။ အထင်။
lamin ngel says: အရက်အကြောင်းလေးရေးထားတော့ ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်သွာသတိရတယ်။ ယမကာလုလင်။စာရေးဆရာကလက်ဖျားတင်မေ့နေတယ်။ သတိရမှထပ်လာရေးမယ်။ သိတဲ့သူများမစပါ။ အဲစာအုပ်ကိုအရမ်းသဘောကျခဲ့တာ
Mr. MarGa says: ယမကာလုလင် – မင်းလူ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အဲ့စာအုပ်​ကို ယမကာ မိုနာလီဇာစမိုင်းလ်​ ​ခေါ်တယ်​
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အရက်​မ​သောက်​ဖြစ်​တဲ့ရက်​က အရက်​​သောက်​ဖြစ်​တဲ့ရက်​ထက်​ အချိန်​ပိုရတာ​တော့အမှန်​ပဲ အဘနီ​ရေ
မိတ်​​ဆွေဖြစ်​ ရန်​သူဖြစ်​လွယ်​တဲ့ ကတ်​တလစ်​စ့်​
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဈေးနှုန်းလေးတွေလွမ်းလိုက်တာ
black chaw says: လောလောဆယ် အရက်မသောက်ဖြစ်တော့ပဲ ဘီယာဘက်လှည့်နေပါတယ်…။
ရာသီဥတု က ပူတာကိုး…။
အရက်ကို ကျွန်တော်က အရသာ မကြိုက်ဘူးဗျ…။
မျိုချလိုက်လို့ ပြန်တက်လာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို ကြိုက်တာ…။
ကျော်သွားရင်တော့ အော့မယ်အန်မယ် လူကို ဒုက္ခပေးမယ်…
ဆိုတော့ အရက်သောက်တာ မကောင်းဘူးပြောတဲ့လူကိုလည်း အပြစ်မပြောပါဘူး။
ကောင်းတယ် ပြောတဲ့လူကိုလည်း အပြစ်မပြောပါဘူး…။
မကောင်းအောင် သောက်ရင် မကောင်းပါဘူး…။
kai says: အရက်ကြောင့်သေတဲ့.. လူဦးရေတွေ..။
တလောက.. ညီတော်မောင်ပြောလို့.. တောအရက်အကြောင်း.. သိရတာ..
အရက်မှမဟုတ်တာပဲ.။ အဆိပ်တွေပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 38
သုဘရာဇာ သံချောင်း says: ဟားဟား ဟား
ချဉ်စုတ်စုတ် တောအရက်တစ်ပိုင်းနဲ့ ကြွက်အရေခွံဆုတ်ပြီးသား ကျတ်တိုက်ကြော်ကို အမြည်းလုပ်ရတဲ့အရသာ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟုတ်တာပေါ့ ဆြာနီရယ် ..
ကောင်းကွက် မရှိရင် .. ဘယ့်နှယ် စွဲမတုန်း …
အဲ့ဒီ ကောင်းကွက် က ဘာများလဲဆိုတာ ဆက်လက် ရှုစားပါရစေ ခညာ …